Baolina kitra - CAN 2021 :: Amidy anio avokoa ireo tapakila eny amin’ny “gradins” • AoRaha
Niova ny fanda­minana amin’ny fivarotana ireo tapakila eny amin’ny sehatra tsy mitafo na ny “gradins” mandritra ny lalaon’ny Barea amin’i Etiopia ao anatin’ny dingana fifanintsanana amin’ ny amboaran’i Afrika na ny CAN 2021 rahampitso.
Nanapa-kevitra ny Fede­rasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF) fa hamidy anio avokoa ireo tapakila valo arivo sy iray alina (18 000). Nanazava Rabekoto Raoul Arizaka, filohan’ny FMF, omaly, teny amin’ny kianjaben’i Mahamasina fa: “mba hialana amin’ny fifa­nosehana sy fikorontanana amin’ny andron’ny lalaon’ny Barea” no nandraisana izany fanapahan-kevitra izany.
Ho hita amin’ny toerana telo ireo tapakila anio ma­nom­boka amin’ny 10 ora marai­na. Hisy famarotana ireo tapakila manoloana ny lapan’ny Fanatanjahantena, etsy Mahamasina ampitan’ny “Bazar du quartier”, eny amin’ny Coliseum Antsonjombe ary eny amin’ny kianjan’ ny Makis Andohantapenaka.
“Tapakila telo ihany fara­fahabetsany no azon’ny olona iray vidiana mba hiso­rohana amin’ny fanararao­tana”, hoy hatrany ny filohan’ ny FMF.
Nametraka fandaminana amin’ny fifamoivozana kosa ireo mpitandro filaminana ho amin’ny andron’ny lalaon’ny sabotsy. “Ho tapaka avokoa ireo lalana mihazo ny kianja­ben’i Mahamasina. Ireo izay nahazo ny fanasana sy izay hijery baolina ihany no afaka miditra ao”, araka ny fanazavan-dRandrianarivelo Anicet, kaomandin’ny vondrom-tom­bim-paritry ny Zandarimaria.
Vavahady dimy no hiso­katra amin’ny rehetra.
Natokana hidiran’ireo mpilalao sy ireo teknisiana ny vavahady lehibe eo anolo­ana. Manasa an’ireo hijery baolina ny filohan’ny FMF mba hahay hifanaja na rehefa hiditra ny kianja na hivoaka aorian’ny lalao. Niantso mpitandro filaminana miisa dimanjato sy arivo ny FMF mba hisorohana amin’ireo loza mety hanjo ny mpijery.
Baolina kitra – « UFFOI U15 » :: Mila mandresy an’i Maorisy ny Malagasy anio
Baolina kitra – “COSAFA U20” :: Tafara-bondrona amin’ny tompondaka indroa nisesy ny Barea